ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး၏30th Aug | HoLOLo....DiLoLO
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်သခင်သွားရာနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကလေးပေါ့။ တနေ့ ကျွန်တော့်သခင်က ကျွန်တော့်ကို ပြည်ကို ခရီးသွားကြမယ်လို့ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်။ shirikittara 2.0 ဆိုပဲ။ ဘာလဲတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်က ခရီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသာရှိပါတယ်။ အဲဒီနေ့က Aug 29th။ ကျွန်တော့်သခင်က အပြင်က ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ခဏနားစေပြီး ညနေစောင်းလောက်မှာ ကျွန်တော့်ဗိုက်ထဲကို ရှပ်အကျီတစ်ထည်၊ rain coatတစ်ထည်၊ ဦးထုပ်တစ်လုံး၊ စာအုပ်တစ်အုပ်၊ သွားပွတ်တံနဲ့ တစ်ရှူးစတာတွေကို ထည့်ပါတယ်။ ည ၉နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော့်သခင်က ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး အိမ်ကနေ ထွက်လာတာကစပြီး ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် မမေ့နိုင်စရာ ခရီးတစ်ခု အစပြုပါတော့တယ်။
အဖြူရောင်တွေတရုံးရုံးနဲ့ ကားပေါ်တက်ကြတော့ ကျွန်တော့်သခင်က ကျွန်တော့်ကို သူ့အပေါ်တည့်တည့်က စင်ပေါ်မှာ နေစေပါတယ်။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့
စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က သခင့်ပေါင်ပေါ်ထိုင်ချင်တာကိုး။ အင်းလေ အပေါ်စီးကဆိုလည်း အားလုံးကို မြင်ရတာပေါ့ဆိုပြီး ကျွန်တော်လည်း
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် သက်တောင့်သက်သာ အနေအထားနဲ့ နေနေလိုက်ပါတော့တယ်။ တနေ့လုံး ပင်ပန်းထားတော့ ကျွန်တော်လည်း အိပ်မလို့ ကြံသေးတယ်။
ဘယ်အိပ်လို့ရမတုန်း။ စကြနောက်ကြနဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတာပဲ။ ကျွန်တော်မျက်လုံး မှိတ်မယ်ကြံလိုက် ရယ်ချင်လာလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးကျွန်တော်လည်း
သူတို့နဲ့အတူတူ စီးမျောသွားပါတော့တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်ရင် သူတို့အားလုံးဆင်းသွားလိုက်၊ နောက်ပြန်တက်လာလိုက်၊ ကားပြန်ထွက်လိုက်၊
စကားတွေပြောလိုက်နဲ့ပဲ မနက်စောစော ဝေလီဝေလင်းမှာ ပြည်မြို့ ရွှေဆံတော်ဘုရားကိုရောက်ပါတော့တယ်။
အားလုံး ကားပေါ်ကဆင်း ခြေလက်သုတ်သင်ပြီး ဘုရားတက်မယ်လုပ်တော့ ဖိနပ်တွေကားပေါ်ချွတ်ထားခဲ့ကြတယ်။ တချို့တချို့ အိတ်ကလေးတွေ ကားပေါ်ကျန်ခဲ့ကြတာ တွေ့ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်မပါဘဲ ကျွန်တော့်သခင် သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ ဟော.. တွေ့လား။ ခေါ်ပါပြီ။
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သခင်လည်း အားလုံးနဲ့တူတူ ဘုရားပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တာပေါ့။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက လှလိုက်တာဗျာ။ အားလုံးက အဲဒီမြင်ကွင်းထဲ နစ်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်လိုက်ကြတာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဖြူရောင်တွေတူနေတဲ့ သူတို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ကို ပျော်နေတော့တယ်။ နောက် မနက်စာစားဖို့ ဆိုပြီး ဓမ္မာရုံကို တန်းစီသွားကြရော။ ယောက်ျားလေးတွေတဖက် မိန်းကလေးတွေတဖက် စီထားတဲ့ စားပွဲမှာထိုင်ကြရင်း ဘဘကြီးတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကားတွေကို နားထောင်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နားထောင်လို့ကောင်းနေတာပေါ့။ ကျွန်တော်မကြားဖူးသေးတဲ့ အကြောင်းတွေပြောနေတာကိုး။ န၀ဒေးရဲ့ကဗျာဆိုလား ရွတ်ပြသေးတော့ ကျွန်တော့်မှာတော့ နားထောင်ကောင်းတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ကိုဖက်ထားတဲ့ ကျွန်တော်သခင်ဆီကတော့ တဂွီဂွီ အသံတချို့ကြားရသေးတယ်။ ဘဘကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာမှ သူတို့တွေ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဆမူဆာတစ်ခုစီစားကြရပါတယ်။ ပြီးတော့ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ထပ်ပတ်၊ နောက် ပြန်ဆင်း၊ ကားပေါ်ပြန်တက်။ ပြန်ထွက်လာခဲ့ရော။
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်နေရာကျွန်တော်ထိုင်ငိုက်နေရာက တချက်တချက်ကြည့်တော့ တံတားကြီးလည်းဖြတ်ပါရဲ့။ ဟိုကွေ့ဒီကွေ့လည်း ကွေ့ပါရဲ့။ ဘာမှမကြာပါဘူး။ ရွှေဘုံသာမုနိ ရောက်ပြီဆိုပြီးဆင်းကြပြန်ပါရော။ ဒီတခါလည်း ကျွန်တော်လိုက်ရပြန်တာပဲ။ တော်တော်လေး အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပါ။
အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ငေးနေဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပန်းပွင့်တွေရော၊ အပင်စိမ်းစိမ်းကြီးတွေရောနဲ့။ ပန်းပွင့်တွေ အများကြီးပွင့်နေတဲ့
ပန်းခင်းတိုတိုလေးနားရောက်တော့ ပန်းပွင့်တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါရောလား။ ပန်းတင်မက ပျားလေးတွေပါတွေ့တော့ ကျွန်တော်လည်း ငေးမိပါရဲ့။ ကျွန်တော်နဲ့
ကျွန်တော့်သခင်လည်း ရင်ပြင်တော်ကိုဆက်ပတ်။ တပတ်ပတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့အထိ ပန်းကို ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်နေကြတုန်း။ နောက်တော့မှ သူတို့အားလုံးရဲ့ အာရုံက
ဘုရားခြေရင်းက မြစ်ကမ်းနားဆီရောက်တော့တယ်။ ခရီးစစတုန်းက သိပ်မသိတဲ့သူတွေလည်း သိလာရင်း ကျွန်တော့်ဗိုက်ထဲက စာအုပ်မှာလည်း www. တွေ @gmail.com တွေတိုးလာပါတော့တယ်။
နောက်တခုဆက်သွားတာက သီရိခေတ္တရာမြို့ဟောင်းဆိုတဲ့နေရာတဲ့။ မရောက်ခင်လေး ကားပေါ်မှာတင် အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က မြို့ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ရှင်းပြပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တာက မြို့တွေရဲ့မူလပုံစံက စက်ဝိုင်းကြီး၊ နောက်မှ စက်ဝိုင်းပျက်ပုံဖြစ်သွားတာ ဆိုတာရယ်။ ၃ရာစုဆိုတာရယ်ပါပဲ။ တကယ်လည်း ပြတိုက်ရောက်ရော။ အဲဒီအစ်ကိုကြီးကပဲ ဆက်ရှင်းပြပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ဟိုကြည့်လည်းနားမလည်၊ ဒီကြည့်လည်းနားမလည်နဲ့ပေမယ့် ဟိုအိုးကြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်၊ ဟိုအရုပ်ကလေးကိုင်ချင်လိုက်၊ ဟိုပုတီးလုံးလေးကို ငေးလိုက် ကျွန်တော့်သခင် ကျောပေါ်ကနေလိုက်ရတာပေါ့။ နောက်သူတို့တွေ
မြို့ဟောင်းရဲ့မြေပုံကြီးရှေ့ရပ်ကြရင်း ဆက်သွားမယ့် ခရီးအတွက်မေးမြန်းကြပါတယ်။ ကားနဲ့ နည်းနည်းသွားပြီး လမ်းလျှောက်ရမယ်လည်းဆိုရော လမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်သခင်လည်း စိတ်ချမ်းသာသွားမှာ အတပ်သိလိုက်သေးတယ်။
စစချင်းရောက်တာက ဘောဘောကြီးဘုရား၊ ထုထည်ကြီးကြီးနဲ့ခန့်ခန့်ကြီး၊ နောက် ဘဲဘဲလေးဘုရားနဲ့ ဗိသနိုးမိဖုရားဂူဆိုလားရောက်တယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံး လည်း နေတွေပူ။ ထီးပါတဲ့သူကထီးဆောင်း၊ ဦးထုပ်ဆောင်းသူဆောင်း၊ ဘာမှမဆောင်းသူလည်းရှိပါရဲ့။ သွားရင်းနဲ့လည်း ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကအကြောင်းတွေ ထင်တာမြင်တာတွေ ပြောကြရင်း စကြရင်းနဲ့မို့လို့ ပင်ပန်းတယ်၊ မောတယ်ညည်းသံတချို့ကြားပေမယ့် ပျော်နေကြတယ်ဆိုတာမလွဲပါဘူး။ အဲဒီကြားထဲ အဆိုးဆုံး ဝေဒနာက ဗိုက်သိပ်ဆာလာတာပဲလို့ ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော်က ဆက်သွားချင်သေးတယ်။ လူတွေကတော့ ထမင်းစားချင်နေကြရော။ ဒါနဲ့ပဲ
နောက်ထပ်သွားရတဲ့ နေရာက ထမင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
ထမင်းဆိုင်ကထွက်ပြီး ကားပြန်ထွက်တော့ အားလုံးနည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ပျော်သွားရော။ ကားရပ်လို့ ရုတ်တရက်နိုးလာတော့
ရွှေနတ်တောင်ဆိုတဲ့ ဘုရားရောက်နေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သခင်နဲ့တူတူ ဘုရားပေါ်တက်တာပေါ့။ ဘုရားပေါ်မှာကလည်း စတုဒီသာ သာကူကျို တိုက်နေတာနဲ့ ၀င်သောက်ကြသေးတာ။ ဘုရားရှိခိုးကြ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနားနေကြတာ၊ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပါပဲ။ အမယ်..သူတို့တွေက
ရန်ကုန်ပြန်ဖို့စောသေးတယ်ဆိုပြီး ချောင်းသာသွားဖို့တောင် ကြံသေး။ ကျွန်တော့်သခင်လို ရုံးတက်ရမယ်သူတွေက ကန့်ကွက်နေတာနဲ့ပဲ မသွားရတာ။ ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့သာဆို လိုက်သွားရောပေါ့။ သခင်ကမသွားဘူးဆိုလို့သာ။ ဒါနဲ့ပဲ ရေပြာကျွန်းဆိုလား၊ အဲဒီမှာနားကြမယ်ဆိုပြီး သွားကြပါလေရော။ ရွှေနတ်တောင်က ရေပြာကျွန်းအသွား လမ်းပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော်အပျော်ဆုံးပါပဲ။ ကားရှေ့ပိုင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းခွဲပြီး သီချင်းတွေဆက်ဆိုတမ်း ကစားကြတာ၊ အော်လိုက်၊ ဟစ်လိုက်၊
ငြင်းလိုက်၊ ခုန်လိုက်နဲ့ စင်ပေါ်က ကျွန်တော်တောင် ၀င်အော်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်။
ရေပြာကျွန်းလည်းရောက်ရော ကျွန်တော့်သခင်က ကျွန်တော့်ကို ကားပေါ်မှာထားခဲ့တယ်ဗျာ။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော်လည်း အပေါ်က မြင်ရသလောက် လှမ်းကြည့်တော့ စကားပြောတဲ့သူတွေ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေ၊ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော့်သခင်ကတော့ အပင်အောက် ငိုက်နေလေရဲ့။ ညနေလည်းကျရော၊ ကားပေါ်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့ ရေချိုးကြ၊ အ၀တ်လဲကြနဲ့ပေါ့။ ညနေစာလည်း အဲဒီမှာပဲစားကြတာ တွေ့ပါတယ်။ ည၇နာရီလောက်မှ
အုပ်စုလိုက်ဓါတ်ပုံရိုက်နေတာတွေ့ပြီး နောက်ဆုံး ကားပေါ်ပြန်တက်လာကြပါတယ်။
အပြန်လမ်းမှာ ပေါင်းတည်မြို့က ဘုရားပွဲကိုလည်း ၀င်လျှောက်ခဲ့သေးတယ်။ ဒီတခါတော့ ကျွန်တော်မကျန်ခဲ့ပါဘူး။ မိုးတစွတ်စွတ်ရွာထားတဲ့ကြားထဲ
လျှောက်ရတာဆိုတော့ သိပ်ကြာကြာလည်း မလျှောက်ဖြစ်ပါဘူး။ ပေါင်းတည်ဘုရားပေါ်ရောက်တော့ နောက်တခေါက်ခရီးအတွက် ပြောကြဆိုကြနဲ့။
ကျွန်တော်တော့ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သခင်က အဲဒီကျရင် ကျွန်တော့်ကိုမှ ခေါ်ပါတော့မလား။ သခင်ဖက်ထားတဲ့ကြားကနေ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကို
မော့ကြည့်တော့ စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတာသာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီဘုရားပေါ်မှာပဲ သူတို့တွေ ကျွန်တော်မသိတဲ့ တစ်ယောက်အတွက် ရှိခိုးဆုတောင်းကြသေးတယ်။ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး မိုးတွေမရွာလာတာလည်း ကျွန်တော့်အတွက် ကံကောင်းတာပါပဲ။ နောက်မဟုတ်ရင် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က စိုစိစိဖြစ်ပြီးရင် သိပ်နေရခက်တာ။
နောက်ဆုံးအပြန်လမ်းကားပေါ်မှာတော့ လူအားလုံး တခေါက်ပြန်မိတ်ဆက်ကြပါရောလား။ မေးခွန်းတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းသား။ နောက်တော့
မီးမှိန်မှိန်အောက်မှာ သရဲအကြောင်းတွေပြောကြသေး။ အလာလမ်းထက်စာရင် အပြန်လမ်းက စကားသံတွေက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေတော့ ကျွန်တော်လည်း
အိပ်ငိုက်ဖို့ မေ့မေ့သွားသေးတယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တခုမှာရပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး ကားတစ်စီးလုံး ပြန်ငြိမ်သွားလိုက်တာ မနက် ၄နာရီ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အထိပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ…….. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရီးစဉ်လေး အဆုံးသတ်ပြီလို့ ကျွန်တော်သခင်က ကျွန်တော့်ကို ပြောလိုက်ရော.. ကျွန်တော်လည်း ဘာကိုမှန်းမသိ လွမ်းသွားပါတော့တယ်။ နောက်တခေါက်ဆိုရင်.. ဆိုတဲ့ခံစားမှုကလည်း ချက်ချင်းရောက်လာပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးခရီးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့အတွေးလည်းပဲ …….
September 4, 2009 by hololodilolo	diary, experience
13 thoughts on “ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး၏30th Aug”
Wow !! အရမ်းမိုက်တယ်..း)
ဝေ ချစ်.. အရမ်းတော် !
နောက်တစ်ခါ ကျနော့်ကိုခေါ်နော်… ဒါ နဲ့နာမည်လေးပြောပြပါလား ဘယ်သူ့အတွက်ဆုတောင်းတာလဲ ရယ် နောက်ပြီး ဆုတောင်းကြတဲ့လူတွေရယ် တိချင်လို့ပါ..နော် ကြောကြနော်
ဟွန်း … တနေကုန်စောင့်နေတာ ငါစာသွားသင်တော့မှ ဆုဝေကတင်တယ် … ခု ၄ ဖြစ်သွားပြီ ပြန်လျော်ပေး … ပြန်လျော်ပေးရမှာက နောက်တစ်ခါလည်း လိုက်ရမယ် ဘာနောက်ဆုံးတုန်း
မိုက်တယ်ဟ သိလား … ဒါများဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေသေး
ကောင်းသားပဲ.. အိုင်ဒီယာ မဆိုးဘူးး… တော်သေးလို့ ကျောပိုးအိပ်.. အက်ျီတွေ ဘာတွေဆို ဟီးဟီး..
ဆုဝေရေ ခရီးသွားပို့စ်လေး ကောင်းပါတယ်…
မမငု >> ဆုတောင်းတာက ကိုနေဘုန်းလတ် အတွက်ပါ.. ဆုတောင်းသူတွေကတော့ ပြည်ကို သွားသော ၄၁ ယောက်သော ဘလော့ဂါတွေကပေါ့း)
ကျွန်တော်လည်းလိုက်ချင်တာဗျ … သင်တန်းတစ်ခုနဲ့ရက်တိုက်နေလို့ …. နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ ဖြစ်အောင်လိုက်မယ် 😀
ကောင်းပါ့လေ ဆုတောင်းကြတာ… ဒါနဲ့တူက ဘာလို့နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရတာလဲ… ကျောပိုးအိတ်က ဟောင်းနေပြီလားဟင်…
တယ်ဟုတ်ပါလားဟ… ကျောပိုးအိတ်က သရဲခြောက်လို့တဲ့… 😛
မဆိုးဘူး….ဆုတွေ အတွက် လိုက်ဖတ်နေတယ်…ကျနော့် ဘလော့ခ်မှာ vote poll လေး တစ်ခု တင်ပေးမယ်…အဲဒီ့မှာ အများဆုံးရတဲ့လူကိုယ် ဆုပေးပါ့မယ်……
မဆိုးဘုဘဲ၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ တစ်ခုက သိပ္ပံမောင်ဝရဲ့ အရေးအသားနှင့် ဆင်ပါတယ်။
Creative writer ကောင်းဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းတယ်နော့်။